Mpivarotra Teknolojia malala: Atsaharo ny fampidiram-barotra mihoatra ny tombontsoa | Martech Zone
Alakamisy Janoary 21, 2010 Alakamisy, Desambra 18, 2014 Douglas Karr
Ny herinandro roa farany dia nanampy tsimoramora aho marketing tools mankamin'ny tranonkala vaovao. Ny iray amin'ireo zavatra goavambe hitako dia ny orinasan'ny teknolojia tia mivarotra endri-javatra ary tsy miraharaha tanteraka ny tombontsoa amin'ny tsena.
Case in point dia fampitahana nyHootsuite mifanohitra amin'ny CoTweet ™:
Ny marketing an'i CoTweet ao amin'ny pejin'izy ireo dia manosika ny tombony amin'ny fampiasana ny lampihazo:
CoTweet dia sehatra iray manampy ny orinasa hahatratra sy hampiditra ny mpanjifa mampiasa Twitter.
Araho maso ny marikao - Mihainoa resaka momba ny vokatrao, marika, orinasa ary mpifaninana aminao. CoTweet no “Rafitra fampitandremana mialoha” anao ao amin'ny Twitter
Ampidiro ny olona manerana ny orinasanao - Mizarà ny asan'ny adidy. Tsindrio ny fahendrena iraisan'ny olona manerana ny faritra miasa toy ny marketing, PR ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Manendre asa ary manaraha ny fanaraha-maso.
Mifantoha amin'ny resaka fa zava-dehibe - Fantaro rehefa mila mitsambikina ianao. Araho amin'ny alàlan'ny fitantanana tranga tsotra ny fifanakalozanao. Fandaharam-potoana vaovao farany hanaovana fanambarana an'ny orinasa.
Tazomy ny marika HUMAN - Ampidiro ho azy ao amin'ny fanavaozana anao ny sonia hamantaranao hoe iza no miresaka sy mitazona ny resaka ataonao manokana.
Ny marketing an-tranonkalan'ny Hootsuite dia resaka rehetra endri-javatra amin'ny sehatr'izy ireo:
Tambajotra sosialy vaovao! - Mitantana kaonty Twitter, Facebook, LinkedIn na Ping.fm marobe amin'ny interface mora ampiasaina.
iPhone App vaovao! - Manorata bitsika, ampio lisitra, ary zahao ny statistika amin'ny fampiharana HootSuite iPhone
Track Statistics - manaitra ny namanao, ny lehibenao, na ny tenanao fotsiny amin'ny statistikan'ny rohy sy ny sary an-tsary.
Vaovao ny lisitry ny Twitter! - Ampidiro ny lisitry anao efa misy na mamorona vaovao ary tantano avy ao amin'ny HootSuite izy ireo
Team Workflow - HootSuite dia manamora ny fitantanana mpampiasa marobe amin'ny kaonty Twitter isan-karazany.
Fanaraha-maso ny marika - Fantaro izay lazain'ny olona momba ny marikao izao.
Fijery manokana - Alamino ao anaty kiheba sy tsanganana ny riakao Twitter. Ataovy personalize araka ny itiavanao azy ny layout.
Fandaharam-potoana fandaharana - Omeo atiny mahavelona ny mpanaraka anao amin'ny fotoana rehetra andavanandro amin'ny alàlan'ny mpandahatra bitsika HootSuite.
Embed Columns - Grab code from HootSuite hametrahana tsanganana fikarohana mora foana ao amin'ny tranonkalanao!
Indray mandeha ihanyHootsuite manonona tombony… ary ny hoe “Manaova seho amin'ny lehibenao”. Marina? Izay no antony hampiasaiko ny lampihanao? Heveriko faHootsuite manana vokatra mahatalanjona, saingy mila manabe ny vinavinan'izy ireo amin'ny antony mahatonga azy ireo ho safidy "Professional" raha resaka sehatra Twitter orinasa no resahina. Isaky ny mampiavaka azy ireo dia apetraho ny fanontaniana hoe "Fa maninona?"… Maninona no manara-maso ny statistika? Fa maninona no jereo ny marikao? Fa maninona no mandahatra bitsika? Inona avy ireo tombony azo amin'ny orinasa?
Aza diso hevitra aho fa hisy mpividy manokana mitady endri-javatra izay mety hanome anao ny faritry ny fifaninanana - fa tokony ho fantatra tsara amin'ny pejy Features izay mora hita sy vakiana. Mino aho fa ny tabilao fampitahana dia mety indrindra.
Ny pejin-tranonao sy ny atiny marketing dia tokony hifantoka amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny sehatrao. Tazomy amin'ny pejy fisongadinana ny fisehoana!
Tags: soacotweetToetoetrahootsuite-barotramarketing an-tserasera
Jan 21, 2010 ao amin'ny 10: 28 AM
Douglas, tsara hoy. Ity fotokevitra ity dia tena ilaina, saingy matetika no tsy raharahiana.
Miasa amin'ny varotra mpanjifa isan'andro amin'ny mpivarotra am-boanjo aho, amin'ny ankabeazan'ny sokajy misy ny fividianana tsy fanentanana, ary ny fanavahana kely ny fifaninanana sy ny vokatra.
Raiso ohatra ny fivarotana seza dingana. Ny ankamaroan'ny orinasa dia manararaotra ny endriny; alim-baravarankely, dingana lehibe amin'ny sehatra, ary hidin-trano iray. Na dia tokony ho marketing aza izy ireo dia mahasoa; maivana, azo antoka & marin-toerana, ary mora ampiasaina.
Hevitra tsotra io, fa mandaitra be tokoa amin'ny karazana varotra sy / na tsena rehetra.
21 Jan 2010 amin'ny 4:46 PM
Toa latsa-pitia amin'ny “teknolojia vaovao” mahafinaritra azy ireo mpivarotra vokatra ka hadinon'izy ireo tanteraka fa tsy miraharaha ilay mpampiasa farany.
Misy zava-poana amin'ny orinasa teknolojia maro. Mila miantsoantso tsy tapaka izy ireo hoe "Jereo izay azoko atao", fa tsy manontany hoe "ahoana no hanampiako anao?"
Lahatsoratra tsara ity. Misaotra nizara ireto ohatra ireto.
21 Jan 2010 amin'ny 10:23 PM
Gregory, tsy afaka nilaza izany tsara ianao. Ary izaho dia meloka tamin'ireny fahotana ireny ihany! Vao haingana aho no nandefa Marketing Tech Vendors ary ny fanontaniana voalohany avy amin'ny namana Jim Brown dia ny hoe: "Inona no hampiasako azy?" Doh! Mbola tsy nahazo ny verbiage marina aho fa marina ny azy!
21 Jan 2010 amin'ny 10:25 PM
Toa anao koa ny manavaka fanavahana ho an'ny orinasanao, Mark! Orinasa maro no tsy mametraka ny talentany eo an-tampony - saingy zavatra izay tandreman'ny orinasam-pandraharahana be dia be izany!
Jan 22, 2010 ao amin'ny 5: 11 AM
Douglas, ianao no sefo, matotra. Mamaky izany aho indraindray, tsy ny tena asako io fa mahita lahatsoratra manome aingam-panahy foana aho toa an'ity. Misaotra ary tsara asa!
DaveO avy amin'ny HootSuite
22 Jan 2010 amin'ny 6:18 PM
DaveO eto - ilay Community Wrangler vao vita pirinty tao HootSuite - nibitsibitsika nilaza fa manome hevitra tsara ianao. Marina tokoa fa mora ho an'ireo orinasa mpanamboatra fitaovana ny ho tia ny injeniera ary tsy hijery ny zava-misy eran'izao tontolo izao hampiasaina - marina indrindra izany amin'ny andro voalohan'ny fanombohana raha ny angovo rehetra dia miompana amin'ny famerenana izay namboarina manodidina ny endri-javatra sy asa.
Niditra tao amin'ny HS aho taorian'ny fampiasako ilay fitaovana ho an'ny fampielezana haino aman-jery sosialy hafa ka fantaro tsara ny tombony azony. Rehefa milamina aho eto, dia hahita fitaovam-pianarana isan-karazany sy fomba fanao tsara indrindra hanasongadinana ireo tombontsoa ianao ary hanehoana ireo fiasa ampiasaina hahazoana ireo tombony ireo.
Mijere hatrany mba hahitana ny fivoarantsika sy ny fisaorana noho ny fanaparitahana ny tantarantsika. Aza misalasala manisy ping ahy @dohoohoots miaraka amina hevitra na hevitra hafa.
PS Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ahy (tsy mahalala henatra fantatro ;-)), tsidiho azafady:
22 Jan 2010 amin'ny 10:57 PM
Miarahaba anao DaveO amin'ny fihadiana vaovao! Miasa amin'ny orinasa manana vokatra mahavariana ianao. Tiako indrindra ny fampiharana iPhone anao, mino aho fa izy no tsara indrindra eny an-tsena. Manantena aho fa azonao atao ny mitondra ity lahatsoratra ity amin'ny ekipa fivarotana Internet anao, mino aho fa hanampy anao hanatsara ny fidiranao amin'ny tsenan'ny orinasa izany.
Misaotra tamin'ny fivoahana ary mamaly - milaza betsaka momba ny HootSuite izy io! 😀
22 Jan 2010 amin'ny 10:58 PM
Misaotra betsaka Guillem! Rehefa nikaroka momba ireo vokatra ireo aho dia nieritreritra fa tsy misy dikany izany
Misaotra betsaka tamin'ny teny soa, Guillem!